Ch 17 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 17 Matthew
17:1 Ary nony afaka henemana,, Jesosy dia naka an'i Petera sy Jakoba sy Jaona rahalahiny,, dia nitondra azy teo an-tendrombohitra avo misaraka.
17:2 Dia niova tarehy teo anatrehany izy. Ka ny tavany namirapiratra tahaka ny masoandro mamirapiratra. Ary ny fitafiany fotsy tahaka ny natao ny oram-panala.
17:3 Ary indro, dia niseho taminy i Mosesy sy Elia, nitenenany taminy.
17:4 Ary Petera namaly ka nilaza an'i Jesosy: "Tompo ô, tsara raha mitoetra eto isika. Raha vonona, aoka hanao lay telo izahay eto, ny anankiray ho Anao, anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. "
17:5 Ary raha mbola niteny, indro, nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Ary indro, nisy feo avy tao amin'ny rahona, nanao hoe:: "Ity no Zanako voafidiko;, izay sitrako. Henoy izy. "
17:6 Ary ny mpianatra, nandre izany, mora lavo niankohoka, ary raiki-tahotra indrindra.
17:7 Ary Jesosy nanatona ka nanendry azy ireo. Ary hoy Izy taminy:, "Mitsangàna fa aza matahotra."
17:8 Ary nanopy ny masony, dia tsy nahita olona, afa-tsy Jesosy irery ihany.
17:9 Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra, Nandidy azy ireo i Jesosy, nanao hoe:, "Lazao tsy misy olona momba ny fahitana, mandra-pahatongan'ny Zanak'olona efa nitsangana tamin'ny maty. "
17:10 Ary ny mpianany nanontany azy, nanao hoe:, "Nahoana ary no ilazan'ny mpanora-dalàna fa tsy maintsy ho tonga aloha Elia mba?"
17:11 Fa ho setrin'ny, dia hoy izy taminy: "Elia, tokoa, dia tonga ka hampody ny zavatra rehetra.
17:12 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa efa tonga i Elia dia, ka tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny azy. Toy izany koa no ny Zanak'olona mijaly azy. "
17:13 Dia fantatry ny mpianatra fa efa niteny taminy momba an'i Jaona Mpanao-batisa.
17:14 Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka, nisy lehilahy nanatona azy, nianjera tamin'ny nandohalika teo anatrehany, nanao hoe:: "Tompo ô, antra amin'ny zanako-lahy, fa ny voan'ny androbe, ary mijaly doza. Fa matetika izy no mianjera ao anaty afo, ary matetika koa any anaty rano.
17:15 Ary nitondra azy tamin'ny mpianatrao, nefa tsy afaka nahasitrana azy izy. "
17:16 Ary Jesosy namaly hoe:: "Tena tsy mino sady efa nivadika taranaka! Mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no no iaretako anao? Ento atỳ amiko izy. "
17:17 Ary Jesosy niteny mafy azy, ary ny demonia nivoaka avy tao aminy, ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay.
17:18 Dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: mitokana, "Nahoana no tsy afaka izahay mba hamoaka?"
17:19 Hoy Jesosy taminy:: "Noho ny fahakelezan'ny finoanareo. Amen Lazaiko aminareo, Azo antoka fa, raha manana finoana tahaka ny voan-tsinapy, dia hiteny amin'io tendrombohitra io, Hoe: Mifindrà erỳ,'Ary izany dia hifindra. Ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao.
17:20 Fa tsara fanahy io dia tsy mamoaka, afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadian-kanina. "
17:21 And when they were conversing together in Galilee, Hoy Jesosy taminy:: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 Ka hovonoiny azy, fa hitsangana indray amin'ny andro fahatelo. "Ary izy ireo tena malahelo.
17:23 Ary nony efa tonga tao Kapernaomy, ireo izay nanangona ny antsasaky ny sekely nanatona Petera, ka hoy ireo taminy:, "Tsy ny Mpampianatra mandoa ny antsasaky ny sekely?"
17:24 Hoy izy, "Eny." Ary rehefa niditra tao an-trano, Jesosy nandeha teo alohany izy, nanao hoe:: "Ahoana no toa anao, Simon? Ary ny mpanjakan'ny tany, Avy amin'iza moa no mandray hetra na ny fanisam-bahoaka hetra: avy ny zanany va, sa avy amin'ny vahiny?"
17:25 Ary hoy izy:, "Avy amin'ny hafa firenena." Hoy i Jesosy taminy: "Ary ny zanany dia maimaim-poana.
17:26 Fa mba tsy ho lasa sakana ho azy ireo: mankanesa ao amin'ny ranomasina, ary nandatsaka azy tao amin'ny hook, ary maka ny trondro voalohany izay nitaiza, ary rehefa efa niloa-bava ny, dia hahita ny sekely. Ento izany ka omeo azy ho azy ireo, ho ahy sy ho anao. "